Fikasana hanao fitsaram-bahoaka : Olona roa voatifitra namoy ny ainy tany Amboangibe Sambava – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:18
Antananarivo, MGA 3	℃
Ambenana fatratra ny borigady ao Amboangibe.
Accueil/Songadim-baovao/Fikasana hanao fitsaram-bahoaka : Olona roa voatifitra namoy ny ainy tany Amboangibe Sambava
Fikasana hanao fitsaram-bahoaka : Olona roa voatifitra namoy ny ainy tany Amboangibe Sambava
Dokotera iray maty novonoin’ny olona tany Amboangibe, ny 21 aprily lasa teo. Rehefa natao ny fikarohana, tratran’ny zandary ireo olona roa nahavanon-doza, ny sabotsy lasa teo. Fantatry ny mponina tany an-toerana izany ka nikasa hamoaka ireo nahavanon-doza tao amin’ny borigady ireo andian’olona ka raikitra ny korontana, izay namoizana olona roa, raha zandary iray naratra voatora-bato, afakomaly…
Rado Harivelo 26 avril 2021
Nisy tranga fikasana hanao fitsaram-bahoaka tao Amboangibe Sambava, anatin’ny Faritra Sava, ny afakomaly lasa teo. Nandrava izany ireo zandary avy ao amin’ny Tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Amboangibe. Niezaka nanao tifi-danitra sy nanapoaka baomba mandatsa-dranomaso ireo mpitandro filaminana, saingy nisisika hatrany ireo andian’olona ireo. Vokany, voatery nampiasa ny fitaovam-piadiana ireo mpitandro filaminana ka olona roa namoy ny ainy, vokatry ny fitifirana nataon’ny zandary, izay niaro ny Toby, raha zandary iray naratra voatora-bato. Raha ny angom-baovao avy any an-toerana, nampiana ireo zandary any amin’ny Kaompanian’i Sambava, hanamafisana ny fiambenana ny birao. Nilazana avokoa ny fianakavian’ireo zandary, mba hipetraka amin’ny toerana azo antoka. Nisy tamin’izy ireo no efa namonjy ny ao an-dakazerina. Niezaka nandamina hatrany ireo zandary any an-toerana ka efa alina vao nitony ireo vahoaka.
Ireo olona efa voasambotra fa nahavanon-doza moa dia efa nafindra toerana. Raha ny tatitra omaly, nisy ny fidinana ifotony nataon’ny Governora sy ny Prefe any an-toerana, mba handaminana ny toe-draharaha, indrindra ny fianakavian’ireo namoy ny ainy. Nitohy ny famotorana momba ireo olona ahina ho nahavanon-doza nahafaty ilay dokotera fototry ny olana. Efa nisy olona iray hafa ahina ho anisan’ny nahavanon-doza nosamborina tao Amboangibe, ny 24 aprily lasa teo.
– Milamindamin-dratsy ny ao an-tanànan’Amboangibe noho ity raharaha ity.
Manoloana ny tranga niseho tany an-toerana, nandray andraikitra ireo Fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena isan’ambaratongany ka nidina tany an-toerana. Nanokafana famotorana manokana ny fisian’ny fitifirana namoizana aina roa ka handraisana fepetra raha nisy tokoa ny hadisoana. Ilay zandary naratra voatora-bato kosa, efa manaraka fitsaboana sahaza azy amin’izao fotoana. Ny Zandarimariam-pirenena dia miara-ory amin’ny fianakavian’ireo namoy ny ainy ka mitondra ny teny fampiononana. Tsiahivina fa tany tan-dalàna i Madagasikara koa aleo ny mpanao ny famotorana sy ny Fitsarana hanao ny asany. Tsy misy ny kiantranoantrano « corporatisme » eo anivon’ny Zandarimaria. Handraisana fepetra hentitra ireo zandary sy ireo mpikomy, raha nisy fahadisoana niseho. Tokony tsy hanao fitsaram-bahoaka eo imason’ny zandary koa ny vahoaka na dia jiolahy aza ilay olona fa manohintohina sy manimba endrika ny mpitandro filaminana sy ny Fahefam-panjakana ary ny vahoaka malagasy eo imason’izao tontolo izao izany. Vahoaka hendry ny Malagasy ka afaka mampitoetra ny fifampitokisana amin’ireo mpitandro filaminana, mba ho soa ho an’ny vahoaka sy ny fiarahamonina.
Raha tsiahivina ny zava-nitranga tany Amboangibe Sambava, nisy dokotera iray novonoin’ny olona tao an-toerana. Rehefa natao ny fikarohana ny mpanao ratsy, hita tany Sambava ny olona telo ka efa voasambotra ary atao andri-maso ao amin’ny Borigadin’i Sambava, amin’izao fotoana miandry ny famotorana. Nandritra ny fanadihadiana savaranonando natao tamin’ireo olona telo tratra, nilaza izy ireo fa misy olona roa ao Amboangibe isan’ireo nandray anjara, izay voasambotry ny Zandary an-toerana, ka antony nahatonga io resaka fikasana hanao fitsaram-bahoaka io. Andrasana, araka izany, ny fivoaran’ny raharaha.
RAHARAHA VOLAMENA 73,5KG : Indianina sy Malagasy iray, nanampy ireo 7 efa nidoboka eny Tsiafahy
FEPETRA NAVOAKAN’NY ACM: Hentitra ny fanarahamaso ireo “Evasan”
KAOMININA ANTANANARIVO: Misy miketrika grevy noho ny resaka politika